China iyona omunye uthi ezinamandla kakhulu futhi anamandla kakhulu ezweni lanamuhla. Ukwanda njalo izinkomba zayo zomnotho izindinganiso futhi eziyinkimbinkimbi kwezempi-industrial eChina eziphilayo akuseyona umgomo okufanele izuzwe, njengengxenye ngokoqobo lapho bakuleli zwe amashumi eminyaka amaningi intuthuko sesinomkhuba. lwemali Chinese ngesikhathi esifanayo ukuthuthukiswa othakazelisayo wonke isimo kuze kube yilolu suku linendima ebalulekile, ngoba ngokuyinhloko uhlela isimiso sezomnotho ezweni, ngaphandle kwalokho kuzoba kuqala okusobala isiphithiphithi Ukuntuleka isimo sanoma yiluphi uhlelo. Lwemali Chinese kuyingxenye ebalulekile impumelelo yezwe, okuyinto China wafuna iminyaka eminingi ngomsebenzi onzima. maqondana wakhe abanekhono futhi enembile kuya zezimali emave, amandla wokuthenga we emakethe yasekhaya oqine Yiqiniso okungantengantengi ngala avunyelwe ngokuhlanganyela nezinye imikhakha yezomnotho Chinese nokukhuthala zabantu bayo ukufeza enjalo impumelelo enviable. Bangabaholi yi namuhla isisindo esikhulu China emhlabeni kwezepolitiki, ibutho elinamandla, ukuthuthuka kwezesayensi ezanda lokube nawo ezingeni lekuphila zabahlali abavamile.
Ezicashile uhlelo yemali
Namuhla, lwemali Chinese the yuan unegama uyaziqhenya, ngokoqobo okusho "okuqondene imali" kunokuba kakhulu lwemali China ubhekwa lonke izwe. Yileyo dollar American e China, kakhulu, Renminbi, kodwa isiqalo Mayo, okuyinto yena, ikhomba lwemali okuqondene US isihloko kazwelonke. Ngendlela efanayo ucingo Chinese nezinye zezimali, ngokuhlanganisa umsindo aduduze lwemali ongalwazi isimo e-Chinese nge yuan yasekhaya. lwemali Native e China ubizwa ngokuthi Renminbi yuan, okusho ngokoqobo "imali zabantu". IsiShayina lwemali yuan kuboniswa ku emakethe exchange angaphandle kufana Japanese ¥ ene, kodwa wanezela imigqa ovundlile, nakho nomuntu unake kuzokusiza uthole umehluko amayunithi yemali. Futhi emakethe yuan exchange has ebhange ikhodi CNY kanye nekhodi i-International Organization for Standardization ISO 4217.
Inani kanye China lwemali
RMB ihlukaniswe zezimali ezincane at 10 Jiao futhi fen 100. RMB kwasani uhlelo ngemali ngezinye nakwentiwa kuyinto ngempela ehlukile futhi kancane ukudideka kodwa ngempela enembile futhi kalula baqonde kuncike ngemva incazelo emfushane. Kulesi simiso, into eyinhloko ukugcina indlela ezilandelana ngayo 1 yuan uhlukaniswe 10 Jiao, futhi omunye Jiao 10 fen. Okungukuthi 4,23 CNY 4 yuan Jiao 2 no-3 Feni. Ngakho-Chinese egcina ngokwakha ezohwebo okukhulunywa imishwana eside idesimali ezihlobene imali zabantu ngokuncane amandla okuthenga, wabiza nje ehlukile emabito iDemo. lwemali Chinese ngesikhathi esifanayo, Nokho esethembisayo, kodwa akanayo izinga sezingeni eliphezulu ukuze ngokuvamile zisebenzisa amandla okuthenga a unit lingana kuze fike wokuhamba the yuan. Nokho Feni namanje efanele kuleli ezikude izifundazwe Chinese. Kuze kube manje 1 CNY 5 kungenziwa umklomelo ruble Russian futhi 25 kopecks.
Lwemali Austria: Umlando, izici, inkambo, futhi amaqiniso athakazelisayo
Imali ye-European Union: amaqiniso athakazelisayo nomlando ukubukeka izinhlamvu zemali zabashintshi 1 euro
Kunengi kangangani okukodwa hryvnia in ruble. Ukrainian lwemali izinga
Sochi: nangapha amasonto amancane namakhulu
Ukuthuthukiswa kwezingane ngesikhathi izinyanga 11 amakhono amasha. Ingane izinyanga 11: ukukhula, umsoco